မိဘများက အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပုံအကြောင်း ပြောကြသည်။ - ဆုလာဘ်
ပင်မစာမျက်နှာ သတင်းဘလော့ မိဘများက အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပုံအကြောင်း ပြောကြသည်။
adminaccount888 6th ဇွန်လ 2022 ပညာရေး, ကျန်းမာရေး, နောက်ဆုံးရသတင်းများ
ဘယ် app တွေကကူညီနိုင်မလဲ။
လူငယ်များကို ကာကွယ်ပေးရန် ဗီဒီယိုများ
အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ Spectrum Disorders
မိဘများနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးသူများအနေဖြင့် သင်သည် သင့်ကလေးများအတွက် အရေးကြီးဆုံး စံနမူနာပြနှင့် လမ်းညွှန်မှု၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ် Porn သည် ဦးနှောက်အပေါ် ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအရ ယခင်က porn နှင့် လုံးဝကွဲပြားပါသည်။ လေ့လာပါ။ ဒီမှာ ဆယ်ကျော်သက် ဦးနှောက်သည် ကလေး သို့မဟုတ် လူကြီး၏ ဦးနှောက်နှင့် မည်သို့ ကွာခြားသနည်း။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအတွက် ဤမိဘများ၏လမ်းညွှန်ချက်သည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော စကားစမြည်ပြောဆိုရန် သင့်အား လုံလုံလောက်လောက်ယုံကြည်မှုရှိစေရန် ကူညီပေးပါမည်။ သင့်ဆယ်ကျော်သက်သည် 'သင့်' အကြံဉာဏ်ကို မယူတော့ဟု ထင်ပါက၊ အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြင့် ခိုးဝှက်ရန် သို့မဟုတ် အသုံးဝင်သော အရင်းအမြစ်များဆီသို့ ညွှန်ပြရန် အချို့သော အခြေအနေများကို အခွင့်ကောင်းယူနည်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ ရရှိပါမည်။ ကြည့်ပါ။ ဒီမှာ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် အသက်အရွယ်စိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ မိဘများ သိထားသင့်သည့်အရာများအကြောင်း ဗြိတိန်ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားခွဲခြားရေးအဖွဲ့၏ နောက်ဆုံးထွက်အချက်အလက်စာရွက်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ကျောင်းအလုပ်အပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့် ၎င်း၏တရားဝင်သက်ရောက်မှုများအပါအဝင် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာကို သင့်ကလေးအား လေ့လာရန် ကူညီပေးပါ။ လူငယ်အများစုအတွက် အကြီးမားဆုံးကြောက်ရွံ့မှုမှာ လိင်စွမ်းအား ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်ပြီး ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော လိင်အင်္ဂါဆိုင်ရာ ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည် ယနေ့ခေတ်တွင် တကယ့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သော ဆိုးကျိုးများကို ကလေးများအား သတိပြုမိစေခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့အား အာရုံစိုက်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုကို နှောင့်နှေးစေသော နည်းလမ်းအဖြစ် သင့်ကလေးသည် အင်တာနက် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုကောင်းသည်ဟု သင်ထင်ပါက၊ ထပ်စဉ်းစားပါ။ အကယ်၍ သင့်ကလေးသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြောင့် နှိုးဆွရန် အခြေအနေပေးလာပါက၊ သူ သို့မဟုတ် သူမသည် အသက်ကြီးလာသောအခါတွင် တကယ့်လူနှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို မခံစားနိုင်တော့ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာ ဖြစ်သည်-
လူမှုဆိုင်ရာနှင့်သီးခြားခွဲနေခြင်း; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုများ; အခြားသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွံရှာခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော အပြုအမူ၊ မပျော်မရွှင် ရင်းနှီးသော လက်တွဲဖော်၊ လိင်အင်္ဂါကမောက်ကမဖြစ်မှု; မိမိကိုယ်ကို ရွံရှာခြင်း၊ ဘဝ၏ အရေးကြီးသော နယ်ပယ်များကို လျစ်လျူရှုခြင်း၊ ညစ်ညမ်းအတင်းအကျပ်အသုံးပြုမှု၊ စွဲလမ်းမှု။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြင်းထန်သောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို နာရီပေါင်းထောင်နှင့်ချီ စွဲလမ်းနေခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ကလေးများသည်လိင်အကြောင်းကြီးကြီးမားမားပြောစရာမလိုပါ အများအပြားပြောဆိုမှုများလိုအပ်ပါတယ် သူတို့ဆယ်ကျော်သက်နှစ်ပေါင်းဖြတ်သန်းအဖြစ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ။ တစ်ခုချင်းစီသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ရမည်၊ လိုအပ်လျှင်အကူအညီတောင်းပါ။ ဖခင်များနှင့်မိခင်များ ယနေ့ခေတ်နည်းပညာများ၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်သူတို့၏ကလေးများအားပညာပေးခြင်း၌နှစ် ဦး စလုံးအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်။
ဆန္ဒပြမှုများနှင့်အတူဖြေရှင်းခြင်း: ဘုံမှတ်ချက်များအတွက် သင်ပေးနိုင်သော တုံ့ပြန်မှု 12 ခုအတွက် အောက်တွင်ကြည့်ပါ။ ကလေးတွေက အစပိုင်းမှာ ဆန္ဒပြနိုင်ပေမယ့် ကလေးတွေတော်တော်များများက သူတို့ရဲ့မိဘတွေကို ညမထွက်ရအမိန့်နဲ့ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွေကို ရှင်းပေးစေချင်တယ်လို့ ကလေးတွေက ပြောထားပါတယ်။ သင့်ကလေးအား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်ပစ္စည်းများတွင် 'စာသားအတိုင်း' ထားခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးအား မည်သည့်အရာကိုမျှ နှစ်သက်မှုမရှိပါ။ တွန်းလှန်ခြင်းကို ကိုင်တွယ်ရန် နည်းလမ်းများကို အောက်တွင် ကြည့်ပါ။
သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို နားထောင်ပါ။ ဖြစ်ပါစေသော authoritative'အမိန့်ပေးထိန်းချုပ်ခြင်းထက် 'အာဏာရှင်' မိဘ။ ဆိုလိုတာက ပညာနဲ့ပြောပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပညာပေးရမယ်။ ထိုနည်းအားဖြင့် သင်ပိုမိုဝယ်ယူရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အားကူညီရန် ဤဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုပါ။
သားသမီးတွေကို ထားပါစေ။ အိမ်စည်းကမ်းများ ချမှတ်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။ မင်းနဲ့အတူ။ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ကူညီပေးရင် သူတို့က ပိုများပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ သူတို့က ဂိမ်းထဲမှာ အသားအရည် ရှိတယ်။
အပြစ်ရှိတယ်လို့မခံစားရပါနဲ့ သင့်ရဲ့ကလေးများနှင့်အတူ assertive အရေးယူဆောင်ရွက်မှုသည်။ သူတို့၏စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်သာယာဝပြောမှုသည်သင်၏လက်၌များစွာရှိသည်။ ဤခက်ခဲသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလကိုသင့်ကလေးနားလည်နိုင်ရန်အတွက်ဗဟုသုတနှင့်ပွင့်လင်းသောနှလုံးဖြင့်သင့်ကိုယ်သင်တပ်ဆင်ပါ။ ဒီမှာကောင်းတယ် အကြံ ကလေး စိတ်ရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန် မှ မိဘ ၏ အပြစ် ပြသနာ အကြောင်း အထူး ပြောနေ သည် ။
မကြာမီက သုတေသနလုပ်ငန်း ကြောင်းအကြံပြု filter များ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသို့ သင့်ကလေးငယ်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းမှ တစ်ယောက်တည်း အကာအကွယ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ဤမိဘများ၏ လမ်းညွှန်ချက်သည် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများကို ပိုမိုအရေးကြီးသည်ဟု ဖွင့်ဆိုထားရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ပိုမိုခက်ခဲအောင် ပြုလုပ်ခြင်းသည် အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်သော ကလေးများအတွက် အမြဲတမ်း ကောင်းမွန်သော အစတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေးမှတန်တယ်။ filter များ အားလုံးအင်တာနက်ကိရိယာများပေါ်တွင်နှင့် စစ်ဆေးနေ တစ်ဦးအပေါ် ပုံမှန်အခြေခံ သူတို့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်။ စိစစ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်အကြံဥာဏ်များအကြောင်းကို Childline သို့မဟုတ်သင်၏အင်တာနက်ပံ့ပိုးသူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြံပေးချက်များ မှားယွင်းသောနှောင့်ယှက်မှုနှင့်တားဆီးနှောင့်ယှက်မှုကိုလျှော့ချပါ ကျောင်းနဲ့ကောလိပ်ကလူငယ်တွေကြားမှာ
နှောင့်နှေးသင့်ကလေးကိုစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ပေးခြင်း နေသမျှကာလပတ်လုံးတတ်နိုင်သမျှသည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကဆိုလိုတာကသင်အဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်တယ်။ မူလတန်းသို့မဟုတ်မူလတန်းကျောင်းတွင်သင့်ကလေးအားစာသင်ကျောင်းသို့စမတ်ဖုန်းဖြင့်ပြသရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်ရသော်လည်းနောက်လများအတွင်းသူတို့၏ပညာရေးအောင်မြင်မှုအတွက်ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာလေ့လာပါ။ ကလေးများသည်အင်တာနက်ကို ၂၄ နာရီတစ်ရက်သုံးရန်အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါသလား။ ကလေးများသည်အွန်လိုင်းအိမ်စာတာ ၀ န်များစွာရရှိနိုင်သော်လည်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်၊ တစ်နေ့လျှင်မိနစ် ၆၀ သာဖျော်ဖြေမှုကိုကန့်သတ်ထားသလား။ ရှိပါတယ် apps များအများကြီး အထူးသဖြင့်ဖျော်ဖြေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်ဖို့။ ကလေးများ2နှစ်နှင့်အားလုံးမှာဖန်သားပြင်ကိုမသုံးသင့်ပါတယ်အောက်မှာ။
ညဥ့်မှာအင်တာနက်ပိတ်ထားပါ။ သို့မဟုတျ, အလွန်အနည်းဆုံး, သင့်ကလေး၏အိပ်ခန်းထဲရှိဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်ဂိမ်းစက်များအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ. ပြန်လည်ကောင်းမွန်သော အိပ်စက်မှု နည်းပါးခြင်းသည် ယနေ့ခေတ် ကလေးများစွာတွင် စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတို့ကို တိုးများလာစေပါသည်။ တစ်နေ့တာ သင်ယူမှုကို ပေါင်းစပ်ကူညီပေးရန်၊ ကြီးထွားလာစေရန်၊ ၎င်းတို့၏ စိတ်ခံစားမှုများကို ခံစားသိရှိနိုင်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ ခံစားရစေရန်အတွက် တစ်ညလုံး အပြည့်အဝ အိပ်စက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
သင်၏သားသမီးကြောင်းသိပါစေ porn Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံအားဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် နည်းပညာကုမ္ပဏီများ အသုံးပြုသူများကို "ချိတ်" ရန် သူတို့ကိုပိုမိုအဘို့အလာမယ့်စောင့်ရှောက်သောအလေ့အကျင့်ဖွဲ့စည်းရန်၎င်းတို့၏အသိအမြင်မရှိဘဲ။ ဒါဟာအားလုံးသူတို့ရဲ့အာရုံကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအကြောင်းပါ။ ကုမ္ပဏီများသည်အသုံးပြုသူ၏လိုအင်ဆန္ဒများနှင့်အလေ့အထများအကြောင်းတတိယပါတီများနှင့်ကြော်ငြာသူများထံရင်းနှီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရောင်းချခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းများပြုလုပ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်များကိုအမြန်ပြန်လာနိုင်ရန်အွန်လိုင်းဂိမ်း၊ လောင်းကစားနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတို့ကဲ့သို့စွဲလမ်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ကလေးများကိုလိင်အကြောင်းသင်ကြားရန်မေးခွန်းထုတ်စရာ porno ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများကိုသင်လိုချင်ပါသလား။
ညစ်ညမ်းကိုသုံးရတာ ဘာကြောင့်ကောင်းသလဲဆိုတဲ့ သင့်ကလေးရဲ့ ငြင်းခုံမှုတွေကို တုံ့ပြန်မှု ဆယ့်နှစ်ခု
ယနေ့ခေတ်ကလေးများသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နိုင်ငံသားများကဲ့သို့ ၎င်းတို့၏ 'အခွင့်အရေး' သာမဟုတ်၊ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အန္တရာယ်မရှိဟု ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ဦးနှောက်ဆေးကြောလုနီးပါးဖြစ်နေကြသည်။ ဝမ်းနည်းစရာက သူတို့မှားနေတယ်။ ကြီးကောင်ဝင်စကာလ၊ အသက် 10 နှစ်မှ 20-25 နှစ်ကြား လူငယ်များသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဖြင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တင်းမာမှုဒဏ်ကို အခံရဆုံးဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ် ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များ၏ ပုံမှန်မဟုတ်သော အစွမ်းထက်သော လှုံ့ဆော်မှုသည် ၎င်းတို့၏ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုပုံစံကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး၊ အချို့က ၎င်းတို့တွေ့ရှိသည့် နှိုးဆွမှုအဆင့်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ လိုအပ်ချက် porn နှိုးဆော်မှုဖြစ်လာသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော လူအစစ်သည် ၎င်းတို့ကို မဖွင့်နိုင်ပေ။ ဥပမာအားဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ကိုယ်လုံးတီး ဓာတ်ပုံများ ပေးပို့ခြင်း သည် ပေါများလာသောအခါတွင် စိန်ခေါ်မှုများစွာသည် အသက် ၁၄ နှစ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ပုံရသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံလေ့လာမှုတစ်ခုအရ အသက် 14 နှစ်တွင် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ တိုးလာပါက ပညာရေးအောင်မြင်မှု 14 လအကြာတွင် ကျဆင်းလာနိုင်သည်။
ကလေးများနှင့် 18 နှစ်အောက်လူငယ်များလည်းမရှိကြပါ။ မှန်သော အချို့သော ပဏ္ဍိတများက ဆိုသကဲ့သို့ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရန်။ ယင်းအစား အစိုးရများနှင့် မိဘများက ၎င်းတို့အား အန္တရာယ်ရှိသော ထုတ်ကုန်များမှ ကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရ အများစုက ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ Porn သည် ဘေးကင်းသောထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ် သက်သေမပြနိုင်ပါ။ တကယ်တော့ ပြောင်းပြန်ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားတွေ ရှိပါတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းအတွက် ကလေးအား အပြစ်တင်ရန် သို့မဟုတ် အရှက်ခွဲရန်ဟူ၍ မဆိုလိုပါ။ သူတို့သည် လိင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး သဘာဝအတိုင်း သိချင်စိတ်ကြောင့် တွန်းတိုက်မိလိမ့်မည် သို့မဟုတ် လိုက်ရှာကြလိမ့်မည်။ အင်တာနက်သည် ၎င်းတို့၏ သတင်းအချက်အလက်အတွက် ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ အဓိကအချက်မှာ မိဘများနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ကလေးများ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
မေးစရာက ဘယ်လောက်များလွန်းနေလဲ။ ဦးနှောက်တိုင်းဟာ ထူးခြားတာကြောင့် သူတို့ကိုယ်တိုင် သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် လမ်းပြအဖြစ်၊ ဦးနှောက်စကင်န်သုတေသန တစ်ပတ်လျှင် ၃ နာရီဝန်းကျင်ခန့် အလယ်အလတ်အသုံးပြုခြင်းသည်ပင် ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ဦးနှောက်၏ အစိတ်အပိုင်းများတွင် မီးခိုးရောင်ကို ကျုံ့သွားစေကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေမှာ ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ ဒါမှမဟုတ် lockdown တွေမှာ မူးဝေသောက်စားခြင်းက ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုး အီတလီနိုင်ငံမှလေ့လာပါ။ တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကို သုံးစွဲသည့် အထက်တန်းကျောင်းသက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ 16% သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော လိင်စိတ်ဆန္ဒနည်းပါးမှုကို ခံစားရကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမဟုတ်သော အသုံးပြုသူများ၏ 0% နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လိင်စိတ်ဆန္ဒနည်းသည်။
စိန်ခေါ်သည့်အခါ အသုံးပြုရန် ငြင်းခုံမှုများ
သူတို့အတွက် ဘာကြောင့်ကောင်းသလဲဆိုတဲ့ စမတ်ကျတဲ့အဖြေတွေနဲ့ သင့်ဆီပြန်တွန်းပို့ဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ နည်းပညာ “ဒိုင်နိုဆော” တစ်ကောင်သာဖြစ်ပြီး သင့်မှာ သူတို့မရှိသေးတဲ့ လက်တွေ့ဘဝအတွေ့အကြုံကို သတိရလိုက်ပါ။ စိန်ခေါ်ခံရသည့်အခါတွင် သင်သည် အောက်ပါအငြင်းပွားမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိုပေမည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ ပေါ်ပေါက်လာသောအခါတွင် ကလေးများ၏ ဘုံထုတ်ပြန်ချက် ဆယ်ခုအတွက် တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သည်။ သင့်ကလေးက သူတို့အတွက် ဘာအကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကို သင်အကောင်းဆုံးသိတယ်။ ထိုစကားဝိုင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင်ပါစေ။ ကံကောင်းပါစေ!
အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေးများသည် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းသည် ယောက်ျားပီသခြင်း၏ အမှတ်အသားဖြစ်ပြီး အရွယ်ရောက်ခြင်းသို့ ကူးပြောင်းခြင်း၏ ဓလေ့တစ်ခုဟု ထင်မြင်ကြသည်။ သို့သော် ညစ်ညမ်းသည် လိင်တံအရွယ်အစားအတွက် စိုးရိမ်မှုများနှင့်အတူ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ငယ်ရွယ်သူများတွင် အစားအသောက်ပုံမမှန်ခြင်းကိုပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ (ဤနေရာတွင် အကြံပြုထားသော စာအုပ်များကို ကြည့်ပါ။ မိဘများ၏လမ်းညွှန် အပြုသဘောဆောင်သော ယောက်ျားပီသမှုကို မြှင့်တင်နည်းအတွက် အကြံပြုချက်များအတွက်။)
တကယ်လား? ညစ်ညမ်းသည် စက်မှုစွမ်းပကားဖြစ်ပြီး၊ အများအားဖြင့် သူစိမ်းများအချင်းချင်း လိင်ဆက်ဆံသည့် ဗီဒီယိုများကို အခြေခံ၍ နှစ်ဖက်မြင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ ဂျပန်မန်ဂါလိုမျိုး ကာတွန်းပုံစံနဲ့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် သင့်အား အခြားသူများလိင်ဆက်ဆံသည်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် နိုးကြားတက်ကြွသူတစ်ဦးဖြစ်လာစေရန် သင်ကြားပေးသည်။ တကယ့်လက်တွဲဖော်နဲ့ တွဲလေ့လာတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ။ တစ်ဖြည်းဖြည်း ခြေလှမ်းများသည် သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်အရာကို လေ့လာနိုင်စေပါသည်။
“ဒါက အရမ်းကောင်းတယ် ခံစားရတယ်၊ အဲဒါက ပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။"
တကယ်တော့ အဲဒါက ဘာလဲ။ “ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်း” ဟုခေါ်သည့် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ အခြားအမျိုးအစားတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ငွေရှာခြင်းလုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ညစ်ညမ်းသရုပ်ဆောင်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လစာနှင့် အခြေအနေများကို ကြွားဝါသော်လည်း သုံးစွဲသူများအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်ကို ဖော်ပြမထားပေ။ Ethical porn သည် ပြင်းထန်သော တူညီသည့် အပြင်အဆင်အများစုကို ပြသထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များသည် ငွေကြေးကုန်ကျတတ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေ ဘယ်လောက်များလဲ။ အခပေး သူတို့ရဲ့ porn အတွက်? မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကို စတင်အသုံးပြုသူများပင်လျှင် ၎င်းတို့သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် စိတ်ဓာတ်ကျလာပြီး ပုံမှန်၊ ကျင့်ဝတ်နည်းသော “ကျင့်ဝတ်” အမျိုးအစားများကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုလိုလားတောင့်တကြသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ပုံမှန် porn များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်း အမျိုးအစားများ အလွန်နည်းပါးပါသည်။
ရေတိုအားသာချက်များရှိသော်လည်း၊ သင်၏စမတ်ဖုန်းကို အိပ်ယာပေါ်တွင်အသုံးပြုခြင်းသည် အပြာရောင်အလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန် အထူးစခရင်ရှိလျှင်ပင် သင့်တွင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲစေသည်။ ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ခြင်း မရှိခြင်းက စိတ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပြီး ကျောင်းတွင် သင်ယူနိုင်မှုနှင့် စာမေးပွဲများဖြေဆိုနိုင်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးထွားမှုနှင့် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ကို တားဆီးနိုင်သည့်အပြင် ဖျားနာခြင်းမှ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေနိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသို့ ဦးတည်သွားနိုင်သည်။
အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ဟုခေါ်သည် စိုစွတ်စေသော မင်းရဲ့ကလေးတွေညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုသူတို့ဆန္ဒရှိတာထက်ပိုသုံးရင်သူတို့ကိုကူညီဖို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ app တစ်ခုပါ။ ၎င်းသည်စျေးမကြီးပါ၊ ယခုအချိန်ထိအလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသောအသုံးဝင်သောဆောင်းပါးများလည်းရှိသည်။
ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပံ့ပိုးမှုရွေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ပြခန်းဂါးဒီးယန်း သူတို့ကလေး၏စက်တွင်သံသယဖြစ်ဖွယ်ပုံတစ်ပုံပေါ်လာသောအခါမိဘများကိုအသိပေးသည်။ ဒါဟာ sexting န်းကျင်အန္တရာယ်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်။
တခဏ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့ app ကို လူတစ် ဦး အား၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သုံးစွဲသူများသည် ၄ ​​င်းတို့အသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာကွာခြားမှုနည်းသွားအောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီ app ဟာဆင်တူပေမယ့်အခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုလမ်းတစ်လျှောက်ကူညီနိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်။ ခေါ်တယ် Brainbuddy.
အသုံးဝင်သောအခြားပရိုဂရမ်အချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည် - Covenant Eyes; အခေါက်; NetNanny; Mobicip; Qustodio မိဘထိန်းချုပ်မှု; WebWatcher; က Norton မိသားစု Premiere; OpenDNS Home VIP၊ PureSight Multi ။ ဤစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သောအစီအစဉ်များသည် The Reward Foundation မှထောက်ခံချက်မပေးပါ။ ဤအက်ပလီကေးရှင်းများရောင်းချခြင်းမှဘဏ္benefitာရေးအကျိုးအမြတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မရရှိပါ။
ပေါ့တ်ကာစ်များ နားထောင်ခြင်းကို နှစ်သက်ပါက ဤနေရာတွင် သင်ကိုယ်တိုင် သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်လို ပရဟိတလို့ခေါ်တယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကြောင်းပြောသော ဆူးပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် မိဘများကိုကူညီရန်ကြိုးစားသော ပထမနှုန်းစီးရီးကို တီထွင်ခဲ့သည်။ podcasts တွေကို. ကျွန်ုပ်တို့၏ CEO ဖြစ်သူ Mary Sharpe သည် ယနေ့ခေတ် အင်တာနက် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင် ဆယ်ကျော်သက်များ၏ ဦးနှောက်၏ ထိခိုက်လွယ်သောသဘောသဘာဝများအကြောင်း “တည်ဆောက်ဆဲဦးနှောက်များ” ဟူသော စီးရီးတွင် ပထမဆုံး တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးစာအုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ကျဂုဏ်ထူးဆောင်သုတေသနအရာရှိ Gary Wilson ဖြစ်သည်။ ငါတို့ပြောလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအမှန်ဘဲ။ အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ် "Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ” ။ ၎င်းသည်မိဘများ၏လမ်းညွှန်ချက်လည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားလူငယ်များနှင့်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်သူတို့၏ရုန်းကန်မှုများမှရာပေါင်းများစွာရှိသောပုံပြင်များပါ ၀ င်သောကြောင့်သင်၏ကလေးများအားဖတ်ရန်၎င်းအားပေးပါ။ လူများစွာသည် ၅ နှစ်မှ ၆ နှစ်အထိငယ်ရွယ်စဉ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကိုစတင်ကြည့်ရှုပြီးမတော်တဆမှားမိသည်။
ဂယ်ရီသည်သိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်သူများအတွက် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ် (သို့) လှုံ့ဆော်မှုစနစ်အားအလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရှင်းပြသောအလွန်ကောင်းသောသိပ္ပံဆရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါစာအုပ်သည်သူ၏လူကြိုက်များအပေါ်တစ် ဦး update ကိုဖြစ်ပါတယ် TEDx အမြင် ၁၄ သန်းကျော်ရှိသည့် ၂၀၁၂ မှဆွေးနွေးချက်။
ဒီစာအုပ်ကို Kbackle (သို့) Kodle (သို့) အော်ဒီယိုစာအုပ်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ယူကေတွင်အသံဗားရှင်းကိုအခမဲ့ရနိုင်သည် ဒီမှာနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူများအတွက် ဒီမှာ, အချို့သောအခြေအနေများမှဘာသာရပ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ရောဂါရှာဖွေရေးအမျိုးအစားအသစ်အားအသိအမှတ်ပြုမှုအားထည့်သွင်းရန်အတွက်၎င်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။compulsive လိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ“ ။ ဘာသာပြန်ချက်များကိုဒတ်ခ်ျ၊ ရုရှား၊ အာရဗီ၊ ဂျပန်၊ ဂျာမန်နှင့်ဟန်ဂေရီဘာသာစကားများဖြင့်ယခုထိရနိုင်သည်။
သင့်ကလေးများကို အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာမှ ကာကွယ်ခြင်း။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအန္တရာယ်များအကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူ သုတေသီ ဒေါက်တာ John Foubert သည် ၎င်းတို့၏ကလေးများကို အင်တာနက် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမှ မည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကို မိဘများနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်သူများအား လမ်းညွှန်မှုပေးရန် ရည်ရွယ်သည့် စာအုပ်အသစ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထံမှဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဒီမှာ.
Boy Crisis ၊
ဒါက ဘလောက်ပေါ်က ကလေးအသစ်ဖြစ်ပြီး အရမ်းကောင်းတဲ့စာအုပ်ပါ။ ၎င်းသည် အပြုသဘောဆောင်သော ယောက်ျားပီသမှုကို အာရုံစိုက်ပြီး၊ မိဘနှစ်ပါးစလုံးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပါဝင်ရန်၊ ယောက်ျားလေးများအား အပြစ်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် အရှက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲ စည်းမျဉ်းများပေးရန် တွန်းအားပေးသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆိုင်ရာ ၎င်းတို့၏ အတိုချုံးကဏ္ဍတွင် စာရေးသူသည် yourbrainonporn.com သို့ ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် ကိုးကား၍ ၎င်းတို့၏ သုတေသနကို ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သင်သိထားသည်။ Boy Crisis ၊ ခေတ်သစ်မိဘများအတွက်လက်တွေ့ကျကျပံ့ပိုးမှုနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုပေးသည်။
နာမည်ကြီးလူမှုရေးစိတ်ပညာရှင်ပါမောက္ခ Philip Zimbardo နှင့် Nikita Coulombe တို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် က Man ပြတ်တောက် ယနေ့လူငယ်များအဘယ်ကြောင့်ရုန်းကန်နေရသလဲနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။ ၎င်းသည် Zimbardo ၏နာမည်ကြီး TED ဟောပြောချက်“ The Demise of Guys” ကိုတိုးချဲ့ပြီးမွမ်းမံသည်။ ခိုင်မာသောသုတေသနကို အခြေခံ၍ ၎င်းသည်အမျိုးသားများအဘယ်ကြောင့်ပညာရေးကိုမီးတောက်လောင်ကျွမ်းစေကာအမျိုးသမီးများနှင့်လူမှုရေးအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျရှုံးစေသနည်း။ ၎င်းသည်ယောကျာ်းလေးများ၏စံပြပုဂ္ဂိုလ်များ၏အရေးပါမှုနှင့်သူတို့ဖခင်ကျန်းမာခြင်းမရှိသောအခါသူတို့ကထိုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးမှုအမှတ်အသားများကိုကျန်းမာစွာဖြင့်ကူညီနိုင်ရန်အဖိုးတန်မိဘလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။
သင့်ကလေး၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ
ကလေးသူငယ်စိတ်ရောဂါဒေါက်တာဗစ်တိုးရီးယား Dunckley ရဲ့စာအုပ် "သင့်ရဲ့ကလေး၏ဦးနှောက် Reset"နှင့်သူမ၏အခမဲ့ ဘလော့ဂ် ကလေးရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်မှာ screen time အရမ်းများတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုရှင်းပြပါ။ အရေးကြီးသည်မှာမိဘများအနေနှင့်၎င်းတို့၏ကလေးအားလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်အောင်ကူညီပေးနိုင်မည့်အရာအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုချမှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အတူကြီးမြတ်မိဘများ၏လမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ Dunckley သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသီးသန့်ခွဲခြားထားခြင်းမရှိသော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။ သူမမြင်တွေ့သောကလေးများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင်သူတို့ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိထားသောဆေးဝါးများဖြစ်သော ADHD၊ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုစသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုများမရှိသော်လည်းသူမအီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်လက္ခဏာဟုခေါ်သည်။ '' ဒီရောဂါဟာဒီအဖြစ်များတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြordersနာများ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုတုပသည်။ များသောအားဖြင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကို ၃ ပတ်ခန့်ကြာအောင်ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပြissuesနာများကိုမကြာခဏကုသနိုင်သည် / လျှော့ချနိုင်သည်၊ အချို့သောကလေးများသည်၎င်းတို့ကိုပြန်လည်အသုံးမပြုခင် ပို၍ လိုအပ်သည်၊ သို့သော် ပို၍ နည်းသောအဆင့်တွင်ရှိသည်။
သူမစာအုပ်သည်မျက်နှာနှစ်ဖက်တွင်အကောင်းဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုသေချာစေရန်အတွက်ကလေး၏ကျောင်းနှင့် ပူးပေါင်း၍ မိဘများကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်တွင်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုလည်းရှင်းပြခဲ့သည်။
ဤစာအုပ်သည် မိခင်၊ ဆရာဟောင်းနှင့် စိတ်ပညာရှင် Colette Smart မှ အသုံးဝင်သော စာအုပ်ဖြစ်သည်။သူတို့ကအိုကေ Be ပါလိမ့်မယ်“ စာအုပ်တွင် သင့်ကလေးများနှင့် သင်ပြောဆိုနိုင်သည့် ဥပမာ ၁၅ ခုရှိသည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စာရေးသူ၏ အဓိက အကြံဉာဏ်အချို့ကို မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် အသုံးဝင်သော TV အင်တာဗျူးသူများလည်း ရှိပါသည်။
မှုခင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ရှိ Autism Spectrum Disorder
အလွန်ရှားပါးသော ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် အော်တစ်ဇင်နှင့် ကျူးလွန်ခြင်းဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးထွက်စာအုပ်မှာ ဒေါက်တာ Clare Allely မှဖြစ်သည်။ အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ် မှုခင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ရှိ Autism Spectrum Disorder 2022 ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စာအုပ်ဖြစ်ပြီး စျေးကွက်တွင် ကွက်လပ်ကို ဖောက်ပြန်ခြင်းနှင့် အော်တစ်ဇင်အကြောင်း ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ အွန်လိုင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုဆိုင်ရာ အထူးကဏ္ဍတစ်ခု ရှိပါသည်။ ဒီစာအုပ်က အော်တစ်ဇင်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ အဲဒါက အာရုံကြောဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အခြေအနေ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှု မဟုတ်ဘူးလို့ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တရားမျှတမှုတွင် ပါဝင်သူတိုင်းနှင့် ကလေးရှိသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ကလေးသည် အော်တစ်ဇင်ဖြစ်နေသည်ဟု သံသယရှိသည့် မိဘတိုင်းအတွက် 'မဖြစ်မနေ' လိုအပ်သည်။
"ကောင်းသောရုပ်ပုံများ, မကောင်းသောရုပ်ပုံများ" Kristen Jensen မှရေးသားသော စာအုပ်သည် ကလေးများ၏ ဦးနှောက်ကို အာရုံစိုက်သည့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ အသက် 7-12 နှစ်
Hamish နှင့်အရိပ်လျှို့ဝှက်။ ဤသည်မှာ အသက် 8-12 နှစ်ကလေးများအတွက် Liz Walker မှ သည်းထိတ်ရင်ဖိုစရာ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
ပုံကောင်းများ၊ မကောင်းသောပုံများ Jr. အသက် 3-6 နှစ်များအတွက်။
ယင်းအကြောင်းကိုလေ့လာပါ ကျန်းမာခြင်း, တရားဝင်၊ ပညာရေး နှင့် ကြားဆက်ဆံရေး ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း၏သက်ရောက်မှုများ အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ အပေါ်အကြံဥာဏ်နှင့်အတူဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြတ်.
ဘယ်လိုပုံကိုကြည့်ပါ ယဉ်ကျေးမှု Reframed မိဘများအစီအစဉ် မိဘများသည် ၎င်းတို့၏ကလေးများကို ညစ်ညမ်းအကြောင်းပြောရန် ကူညီပေးသည်။ လူမှုဗေဒ ပါမောက္ခဟောင်း Dr Gail Dines နှင့် သူမ၏အဖွဲ့သည် မိဘများ ညစ်ညမ်းခံနိုင်ရည်ရှိသော ကလေးများကို ပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင် ကူညီပေးမည့် အခမဲ့ toolkit တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သည်။ စကားပြောဆိုနည်းကို ကြည့်ပါ။ ယဉ်ကျေးမှု Reframed မိဘများအစီအစဉ်။
အဆိုပါ စိုစွတ်စေသော ဝဘ်ဆိုက်တွင် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဉာဏ်များစွာ ရှိသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် မည်မျှ ခက်ခဲသည်ကို နားလည်ပါ။ မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း။ ထိပ်တန်းစိတ်ပညာရှင်၏ဗီဒီယိုဖျော်ဖြေမှု။
အသုံးပြုသူအတွက်လွယ်ကူသောအန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်များကိုကာကွယ်ခြင်း ကိရိယာတန်ဆာပလာ Lucy Faithfull Foundation မှဖြစ်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအသစ်ကိုတိုက်ထုတ်ပါ porn နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ကလေးတွေကိုပြောပြရန်ကဘယ်လို။
မှအကွံဉာဏျ အွန်လိုင်း porn အကြောင်းကို NSPCC. ခြောက်နှစ်သားအရွယ်ကလေးများသည် ကြမ်းတမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြသည်။ ဒီမှာ တစ်ခု အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်“ မွမ်းမံခြင်း” ဟုခေါ်သည့်ပုံမှန်အားဖြင့်ငါမသိခဲ့ဘူး…အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းပုံများရဲ့တန်ဖိုးများ၊ သဘောထားများ၊ ယုံကြည်ချက်များနှင့်လူငယ်များ၏အပြုအမူများအပေါ်အရည်အသွေးနှင့်ပမာဏစစ်ဆေးခြင်းကိုငါမသိခဲ့ဘူး။
ဒီ2မိနစ်, တောက်ပ ကာတွန်း လျင်မြန်သော ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ကလေးများကို ကာကွယ်ရန် အသက်အရွယ် စိစစ်ရေး ဥပဒေများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် အရေးတကြီး လိုအပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းတွင် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ မပါဝင်သောကြောင့် ၎င်းကို သင့်ကလေးများကိုလည်း ပြသနိုင်သည်။ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ စပိန္ နှင့် ဘရာဇီးပေါ်တူဂီ.
ဒီ TEDx ဟောပြောချက်မှာလိင်၊“ ပါမောက္ခ Warren Binford သည်မိခင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆရာတစ် ဦး အနေဖြင့်စကားပြောခြင်းသည် porn သည်ကလေးများအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုကောင်းစွာခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။ ပါမောက္ခ Gail Dines ၏ဤ TEDx ဟောပြောချက်တစ်ဦး pornified ယဉ်ကျေးမှု၌ကြီးပြင်း” (၁၃ မိနစ်) ကယနေ့ကလေးများ၏လိင်မှုဆိုင်ရာပုံသဏ္musicာန်ကိုဂီတဗီဒီယိုများ၊ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်လူမှုမီဒီယာများကမည်သို့ပုံသွင်းနေသည်ကိုရှင်းလင်းစွာရှင်းပြထားသည်။
ဤတွင် TEDx ဆွေးနွေးချက် (၁၆ မိနစ်) ဟုခေါ်သည်။ဘယ်လို Porn လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြျှောလငျ့ Skews"အမေရိကန်မိခင်နှင့်လိင်ပညာပေးနေဖြင့် Cindy ပီယပ်။ သူမ၏မိဘများလမ်းညွှန်ကသင်၏ကလေးများနှင့်လိင်မှုကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဆက်လက်ဆွေးနွေးခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလိုအပ်နေရသနည်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိသည်ဟုဆိုသည် ဒီစကားဝိုင်းတွေဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာအရင်းအမြစ်တွေအများကြီးကိုအောက်မှာကြည့်ပါ။
ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော TEDx ဟောပြောချက်ကိုအမေရိကန်အပြုအမူဆိုင်ရာစီးပွားရေးပညာရှင် Dan Ariely ဟုခေါ်သည် အချိန်ကာလ၏အပူ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆုံးအဖြတ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု.
လူကြိုက်များသောဗီဒီယိုအသစ်ကိုကြည့်ပါ"Porn တွင် ပေါက်ကြားခဲ့သည်။“ ကြာချိန် ၃၆ မိနစ်။
အံ့သြဖွယ်၊ ပလတ်စတစ်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ် ဦး နှောက်
ကြီးကောင်ဝင်စသည် အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်ဝန်းကျင်တွင် စတင်ပြီး နှစ်ဆယ်ကျော်အထိ ကြာရှည်သည်။ ဤအရေးကြီးသော ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကာလတွင် ကလေးများသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် သင်ယူမှုကာလကို တွေ့ကြုံရသည်။ အများစုအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသမျှသည် ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှေးကွေးသွားသည့်အချိန်တွင် ခိုင်မာသောလမ်းကြောင်းများ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အပျိုဖော်ဝင်စကနေစပြီး ကလေးတွေဟာ လိင်ကိစ္စကို အထူးစိတ်ဝင်စားလာပြီး အဲဒီအကြောင်းကို တတ်နိုင်သမျှ လေ့လာချင်လာကြတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သဘာဝ၏ နံပါတ်တစ် ဦးစားပေးမှာ လိင်မျိုးပွားခြင်း၊ မျိုးဗီဇများ ပေးပို့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ အဲဒါကို အာရုံစိုက်ဖို့၊ အဆင်သင့်ဖြစ်၊ မဖြစ်၊ မလုပ်ချင်ရင်တောင်မှ အာရုံစိုက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ အင်တာနက်သည် ကလေးများကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို အဖြေရှာရန် ပထမဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွေ့ရှိထားသည်မှာ အကြမ်းဖျင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ အကန့်အသတ်မရှိ များပြားနေပြီး မမျှော်လင့်ထားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာ တိုးလာသည့်အတွက် ဝမ်းနည်းစရာပင်။
အခမဲ့၊ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခွင့်၊ ကြမ်းတမ်းသော ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်သည် သမိုင်းတွင် ထုတ်ဖော်ဖူးသမျှ အကြီးမားဆုံး၊ စည်းကြပ်မှုမရှိသော လူမှုစမ်းသပ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စွန့်စားရှာဖွေနေပြီဖြစ်သော ဦးနှောက်သို့ စွန့်စားရမည့် အပြုအမူအသစ်အဆန်းများကို ပေါင်းထည့်သည်။ အံ့ဖွယ်ကောင်းခြင်းအကြောင်း ပိုမိုနားလည်ရန် ဤဗီဒီယိုအတိုကို ကြည့်ပါ။ ပလတ်စတစ် ဆယ်ကျော်သက် ဦးနှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရှင်နှင့် ကလေးစိတ်ရောဂါ ပညာရှင်တို့က ဤတွင် ပို ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် တစ် ဦး neuroscientist ထံမှမိဘများအဘို့အကွံဉာဏျအတူ။
ယောက်ျားလေးတွေက မိန်းကလေးတွေထက် ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို ပိုသုံးလေ့ရှိပြီး မိန်းကလေးတွေက ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်တွေကို ပိုနှစ်သက်ကြပြီး 50 Shades of Grey လိုမျိုး စိတ်လှုပ်ရှားမှုဇာတ်လမ်းတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ဒါက မိန်းကလေးတွေအတွက် သီးခြားအန္တရာယ်တစ်ခုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူမ၏ Kindle တွင် ဇာတ်ကြောင်းအပြာကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ဖတ်နေသည့် အသက် ၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရသည်။ ၎င်းသည် သူမ၏မိခင်က သူအသုံးပြုခွင့်ရှိသည့် အခြားစက်ပစ္စည်းများအားလုံးတွင် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို ထည့်သွင်းခဲ့သော်လည်း Kindle တွင် မဟုတ်ပါ။
ဆယ်ကျော်သက်အများကသူတို့မိဘများသည်သူတို့နှင့်အတူအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုဆွေးနွေးခြင်းတွင် ပို၍ တက်ကြွစွာပါဝင်လိုကြောင်းပြောကြသည် သူတို့သည်သင့်ကိုအကူအညီမတောင်းနိုင်လျှင်မည်သည့်နေရာသို့သွားမည်နည်း။
လူကြိုက်အများဆုံး website ဖြစ်ပါတယ် Pornhub ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှု၊ ညှို့ယူနှိပ်စက်ခြင်း၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ Incest အဆိုအရအမြန်ဆုံးကြီးထွားလာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည် Pornhubကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်းများ ၎င်းသည်အများစုကိုအခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တစ်နှစ်တည်းတွင်၊ သူတို့သည်နှစ်သန်း ၁၃၀ တန်ဖိုးရှိသောညစ်ညမ်းဗီဒီယို ၆ သန်းကိုတင်ခဲ့သည်။ ယူကေတွင်တစ်နေ့လျှင်အစည်းအဝေးပေါင်း ၇ သန်းရှိသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေမှုအဖြစ်လုပ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသည့်တိုင်သုံးစွဲသူ ၂၀-၃၀% သည်ကလေးများဖြစ်သည်။ ကလေးများ၏ ဦး နှောက်သည် ၄ ​​င်းတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်နွယ်မှုများကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိဘဲထိုကဲ့သို့သောစက်မှုဆိုင်ရာခွန်အားနှင့်လိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ Pornhub သည်ကူးစက်ရောဂါသည်သုံးစွဲသူများကိုပိုမိုချိတ်ဆက်ရန်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုရှုမြင်ပြီးနိုင်ငံအားလုံးရှိသူတို့၏ပရီမီယံ (များသောအားဖြင့်ပေးရသော) ဆိုဒ်များကိုအခမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။
ဒီအရ သုတေသနလုပ်ငန်း 2019 ခုနှစ်မှစ၍၊ အသက်7နှစ်နှင့် 8 နှစ်အောက်ကလေးများသည် အမာခံညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင် ထိမိ၍လဲကျနေပါသည်။ ဤသုတေသနတွင် မိဘများနှင့် လူငယ် ၂,၃၄၄ ဦး ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ရှုသည့်လူငယ်အများစု၏ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သည်မတော်တဆဖြစ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်းကိုမရည်ရွယ်ဟုဆိုသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြသောကလေးများ ၁၁-၁၃ တွင် ၆၀% ကျော်သည်မတော်တဆဖြစ်ခဲ့သည်။
ကလေးများသည်အထူးသဖြင့်အသက် ၁၀ နှစ်အောက်အရွယ်၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြသူများကို“ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း” နှင့်“ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း” ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်အရွယ်ရှိထက်ဝက်ကျော် (၅၁%) ကတစ်ချိန်ချိန်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီး ၁၄-၁၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ၆၆% အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
မိဘများ၏ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းကအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအတွက်အသက်စစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်သင့်ကြောင်းသဘောတူသည်
မိဘများ၏အမြင်နှင့်ကလေးများအမှန်တကယ်ကြုံတွေ့နေရသည့်အကြားကွာဟမှုကိုလည်းအစီရင်ခံစာကဖော်ပြခဲ့သည်။ မိဘများ၏လေးပုံသုံးပုံ (၇၅%) ကသူတို့ကလေးများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအွန်လိုင်းတွင်မတွေ့ရဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော်သူတို့၏ကလေးများ၏ထက်ဝက်ကျော် (၅၃%) က၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။
BBFC ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် David Austin က "ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် UK ရှိ အသက်အရွယ်အားလုံးရှိ ကလေးများအတွက် လောလောဆယ်တွင် တစ်ချက်နှိပ်ရုံသာ ရှိပြီး၊ ဤသုတေသနပြုမှုသည် လူငယ်များ ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေး၊ လိင်ဆက်ဆံမှုကို နားလည်သဘောပေါက်လာပုံတို့ကို ထိခိုက်စေကြောင်း ဤသုတေသနပြုချက်သည် ကြီးထွားလာနေသော ခန္ဓာကိုယ်ကို ထောက်ပံပေးပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်သဘောတူညီချက်။ သုတေသနပြုချက်များအရ ကလေးသူငယ်များ—အချို့သောကိစ္စများတွင် အသက်ခုနစ်နှစ် သို့မဟုတ် ရှစ်နှစ်အထိ—အွန်လိုင်းတွင် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကို ပထမဆုံးမြင်ရသောအခါတွင် ရည်ရွယ်ချက်မှာ အများစုမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း ပြသသည်။” British Board of Film Classification ၏ နောက်ဆုံးထွက်ကို ကြည့်ပါ။ တကယ်တော့စာရွက် အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် အသက်စစ်ဆေးခြင်းအကြောင်း။
မိဘများမှမိဘများအတွက်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည်ကလေးများအပေါ် Porn ၏သက်ရောက်မှုအကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသည်
ဤအကြံပြုချက်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်ငွေမျှ မရရှိသော်လည်း ဤဗီဒီယိုသည် မိဘများ၏ လမ်းညွှန်ချက်အနေဖြင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် အခမဲ့နောက်တွဲယာဉ်ကိုကြည့်ပါ Vimeo တွင် မိဘများအတွက် ရိုက်ကူးပေးထားသည့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့် ပြဿနာ၏ အကောင်းဆုံး ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပြီး သင့်ကလေးများနှင့် အဆိုပါ ရှုပ်ထွေးပွေလီသော စကားစမြည်ပြောဆိုနည်းများစွာကို ဥပမာများ ပေးထားသည်။ နောက်ခံဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက် £4.99 သာကုန်ကျပါသည်။
ကဲ့သို့သောအဓိကအခမဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူ website အများစုဟာ yourbrainonporn.com; RebootNation.org; PornHelp; NoFap.com; သည်ကြီးမြတ်သော Go, အင်တာနက်က Porn စွဲ နှင့် Remojo.com လောကီသားများဖြစ်သော်လည်းဘာသာရေးသမားများလည်းရှိသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ကူးတစ်ခုရဖို့မိဘတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အဖြစ်အသုံးဝင်ပြီးအခုသူတို့ညှိနေတဲ့အတိုင်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေတယ်။
ကဲ့သို့သောယုံကွညျအခြေစိုက်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်လည်းရရှိနိုင်ကောင်းသောအရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ် သစ်စာသမာဓိပွနျလညျဖွ ကက်သလစ်များအတွက်, ယေဘုယျအားဖြင့်ခရစ်ယာန်များအတွက် အဝတ်အချည်းစည်းအမှန်တရားစီမံကိန်း (ဗြိတိန်) ဘယ်လို Porn အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင် (ယူအက်စ်) နှင့် MuslimMatters အစ္စလာမ့်ယုံကြည်ခြင်း၏သူတို့အဘို့။ ကျနော်တို့အကူပေးနိုငျမဆိုအခြားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်-based စီမံကိန်းများကိုရှိပါတယ်လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
မည်သည့်မိဘ၏လမ်းညွန်မှုမဆိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ကလေးများနှင့်မိဘနှစ် ဦး စလုံးရင်ဆိုင်နိုင်သောတရားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ကလေးများအားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းပုံကိုပုံမှန်သုံးခြင်းသည်ကလေး၏ ဦး နှောက်၊ ၎င်းတို့၏လိင်စိတ်နိုးကြားစေသောပုံစံကိုပုံသွင်းသည်။ ၎င်းသည် sexting နှင့် cyberbullying အပေါ်ကြီးမားသောသြဇာရှိသည်။ မိဘများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်အခြားသူများကိုထိခိုက်စေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်စေသောသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်လာစေသောတရား ၀ င်သက်ရောက်မှုများဖြစ်သင့်သည်။ ဒီ စာမျက်နှာ စကော့တလန်အစိုးရမှခန့်အပ်ထားသောကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့မှကလေးများအကြားအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပြုလုပ်ရန်ဤအပြုအမူများကိုဥပမာပေးသည်။ ဒီနေရာမှာလည်းကြည့်ပါ စကော့တလန်ရှိ Sexting။ Sexting in အင်္ဂလန်၊ ဝေလနယ်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ။ ဥပဒေသည် မတူညီသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် အချို့သော ကဏ္ဍများတွင် ကွဲပြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဂျပန်ကာတွန်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ (Manga) ကို အင်္ဂလန်နှင့် ဝေလနယ်တို့တွင် တရားမဝင်သော်လည်း စကော့တလန်တွင် မဟုတ်ပါ။
Lucy Faithfull Foundation ၏ Toolkit
ကလေးသူငယ်ဆန့်ကျင်ရေးအလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာပရဟိတလုပ်ငန်း Lucy Faithfull Foundation ၏အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်သစ်ကိုကြည့်ပါ ကိရိယာတန်ဆာပလာ မိဘများ၊ စောင့်ရှောက်သူများ၊ မိသားစု ၀ င်များနှင့်ပညာရှင်များကိုရည်ရွယ်သည်။ Reward ဖောင်ဒေးရှင်းကိုအကူအညီအရင်းအမြစ်အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။
ယူကေတွင်ရဲသည်ရာဇ ၀ တ်မှုရာဇ ၀ တ်မှုစနစ်ရှိဆက်စ်တင်အဖြစ်အပျက်များကိုသတိပြုရန်ဥပဒေအရလိုအပ်သည်။ သင့်ကလေးသည်မလျောက်ပတ်သောပုံများဖြင့်ဖမ်းမိပြီး၎င်းကိုရယူခြင်းသို့မဟုတ်အခြားသူများထံလွှဲပြောင်းခြင်းတွင်အတင်းအကျပ်ပြုခဲ့ပါကသူသို့မဟုတ်သူမအားရဲမှစွဲချက်တင်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများကိုရဲကအလွန်လေးနက်စွာထည့်သွင်းစဉ်းစားသောကြောင့်၊ ရဲရာဇ ၀ တ်မှုရာဇ ၀ တ်မှုစနစ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် sexting ပြစ်မှုကိုအားနည်းချက်ရှိသူများနှင့်တိုးမြှင့်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုလာသောအခါအလုပ်ရှင်အားလက်ဆင့်ကမ်းလိမ့်မည်။ ဤတွင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်ပါဝင်သည်။
စာပို့ခြင်းသည်အန္တရာယ်ကင်းသောပရောပရည်လုပ်ပုံရသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပြင်းထန်သောသို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်ပြုလျှင်များပြားပါကသက်ရောက်မှုသည်သင့်ကလေး၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအလားအလာအတွက်လေးနက်သောရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်လူငယ်များယုံကြည်မှုသည်အတင်းအကျပ်ပြုမူသောအပြုအမူများကိုကူးယူရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။
Kent ရဲများသည်မိဘများအား ၄ င်းတို့ကလေးအားတရားမ ၀ င် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းအတွက်ဖုန်းဖြင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူများအဖြစ်စွပ်စွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင့်တွင် Autism spectrum တွင်ပါဝင်နေသူဟု အကဲဖြတ်ခံထားရသော ကလေးရှိပါက၊ သင့်ကလေးသည် အာရုံကြောဆိုင်ရာ ကလေးများထက် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင် စွဲလမ်းမှုဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများနိုင်ကြောင်း သတိပြုရန်လိုသည်။ သင့်ကလေးသည် ရောင်စဉ်တန်းပေါ်ရှိနိုင်သည်ဟု သင်သံသယရှိပါက ၎င်းတို့ကိုထားရှိရန် အကြံဥာဏ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အကဲဖြတ် ဖြစ်နိုင်လျှင်။ အထူးသဖြင့်မြင့်မားသော Asperger's Syndrome ရှိသော ASD ရှိသောလူငယ်များသည်အထူးအားနည်းသည်။ Autism သည်အနည်းဆုံးထိခိုက်နိုင်သည် ၁.၂% လူ ကြီးမားသောလူ ဦး ရေ၏စစ်မှန်သောပျံ့နှံ့မှုမှာမသိရှိရသေးသော်လည်းပိုမိုများပြားသည် ကလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကျူးလွန်သူအပေါ်ကလေး၏ 30% သင်ယူမှုအခက်အခဲရှိသည်။ ဒီမှာ မကြာသေးမီစက္ကူ လူငယ်တစ် ဦး ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်။ လိုအပ်ပါကစက္ကူရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Autism spectrum disorder သည် မွေးကတည်းက ရှိနေသော အာရုံကြောဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသားများကြားတွင် ပို၍အဖြစ်များသော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း 5:1၊ အမျိုးသမီးများတွင်လည်း ၎င်းကို ရရှိနိုင်သည်။ တစ် မကြာသေးမီဆောင်းပါး အော်တစ်ဇင်အကြောင်းနှင့် screen time သည် မိဘများအတွက် သတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤဘလော့ဂ်များကို ဖတ်ရှုပါ။ porn နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ; မိခင်တစ် ဦး ၏ပုံပြင်; နှင့် အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ: စစ်မှန်သောသို့မဟုတ်အတု?, ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ကြည့်ပါ တင်ဆက်မှု ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube ချန်နယ်တွင် ဤအလွန်ကောင်းသောစာအုပ်အသစ်ကိုကြည့်ပါ။ မှုခင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ရှိ Autism Spectrum Disorder. ကလေးသည် အော်တစ်ဇင်ဖြစ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ယင်းကဲ့သို့ အကဲဖြတ်ခံရသည်ဟု သံသယရှိသည့် မိဘများနှင့် ဆရာများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
ဤအရာသည်မိဘများအားကျောင်း၏အကူအညီဖြင့်ပင်တစ်ယောက်တည်းကိုင်တွယ်ရမည့်ကိစ္စကြီးဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်အစိုးရသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအားနည်းချက်အရှိဆုံးသူများကိုကာကွယ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ မူလအသက်အတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုင်း ၃) ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီများအားအသက် ၁၈ နှစ်အောက်လူငယ်များအားစီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ကိုကန့်သတ်ရန်ပိုမိုထိရောက်သောအသက်အတည်ပြုခြင်းဆော့ဝဲကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤဥပဒေသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီလေးတွင်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
အစိုးရသစ်သည်လူမှုမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်စီးပွားရေးညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များပါ ၀ င်မည့်စည်းမျဉ်းသစ်များကိုအစိုးရကကတိပြုသည် အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးဘီလ် 2021။ ဒါက တစ်ခု အလွန်ကောင်းသောဘလော့ဂ် ကလေးများ၏လုံခြုံစိတ်ချရမှုဆိုင်ရာအွန်လိုင်းကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကလက်ရှိအဆိုပြုချက်ကိုအထူးသဖြင့်၎င်း၏အားနည်းချက်များကိုဖော်ပြသည်။ ထိုအတောအတွင်းမိဘများနှင့်စောင့်ရှောက်သူများသည်သူတို့၏အင်တာနက်ကိုလုံခြုံစွာအသုံးပြုမှုကိုကူညီလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ရန်ကျောင်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအတွက်ဤမိဘများ၏လမ်းညွှန်ချက်သည်သင့်အားကူညီရန်ရနိုင်သောအကောင်းဆုံးပစ္စည်းအချို့ကိုခြုံငုံသုံးသပ်သည်။ သင့်ကလေး၏ကျောင်းအားကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုကိုအားပေးပါ အခမဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များ sexting နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းများကဲ့သို့လည်းကောင်း
ကလေးများကြီးပြင်းလာစေရန်၊ ချစ်ခင်။ လုံခြုံသောရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိစေလိုသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယို, "အချစ်ဆိုတာဘာလဲ?" လက်တွေ့တွင်ကြည့်နေသည့်အရာကိုသတိရရန်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်6ဇွန်လ 2022 တွင် နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။